Lazainay aminao ny atao hoe edamame, ny fananany ary ny fomba fandraisana azy | Nutri Diet
Edamame mamafa ny tranon'ny olona maro. Angamba tsy fantatrao tsara hoe inona io sakafo io, inona ny fananany na ahoana no fihinanana azy tsara. Aza manahy, etsy ambany, holazainay amin'ny antsipiriany ny zava-drehetra.
Mirongatra ny fihinanana soja, nihanaka erak'izao tontolo izao. Sakafo mahasalama ny edamames, manan-karena otrikaina ary mety tsara hahatonga azy ireo ho sakafom-pahasalamana mahasalama.ny edamame avy amin'ny soja, ny anarana dia manondro ny lovia vita amin'ireo soja maitso ireo, fa tsy ny vokatra. Izany hoe tsy antsoina ny polipitra maintso edamame Ny fanomanana dia tena tsotra, lafiny iray izay nahatonga ny olona maro hampiditra azy io amin'ny sakafony.
1 Inona no atao hoe edamame?
2 Fananana Edamame
3 Ahoana ny fihinanana azy?
4 Aiza no hividianana azy
Inona no atao hoe edamame?
Ny edamame dia ny voany na voanjo maitso an'ny soja, nangonina izy ireo talohan'ny nahatongavany. Maitso izy ireo, loko iray mitovy amin'ny voanjo sy tsaramaso fantatsika. Avy amin'ny fianakaviana legume izy ary kely ny habeny. Ao anaty vala soja iray maitso dia ahitantsika eo afovoan'ny soja 2 na 3 ary manana elanelana lehibe eo anelanelan'izy ireo izy ireo.
Ilay edamame, Rakotra volo kely izy io, toetra iray tokony hikajiana hahafantarana ny fanavahana azy ireo amin'ny legioma vaovao.
Manaraka izany dia holazainay aminao hoe inona avy ireo fananana mahafinaritra sy tombontsoa azo avy amin'ny edamame.
Loharano lehibe iray izy io proteinina niavian'ny legioma.
Misongadina amin'ny atiny lehibe ao kalsioma sy vy.
Ity sakafo ity dia ambany tavy, izay mety indrindra ho an'izay rehetra mitady hampihena na hifehezana ny kolesterola.
Izy io dia manana toetra antioksida, noho ny atiny avo lenta isoflavones. Isoflavones manampy ny vehivavy menopausal hitazomana hoditra sy zavamananaina tsara.
El edamame, manezioma manezioma, mineraly izay manatsara ny fahasalaman'ny taolana.
Ny atiny vy avo sy proteinina avo lenta no mahatonga azy io ho sakafo afaka mameno angovo antsika.
Manana atiny avo lenta ao fibre. Isaky ny Edamame 100 grama dia azontsika ny fibre 8 grama.
Izy io dia sakafo tsy misy gluten, ka izay mahazaka gluten dia afaka mandray azy tsy misy olana.
Mitazona ny hery fiarovana mahery vaika.
Izany dia loharanon-kery lehibe.
Ampirisihina amin'ny olona izy io voan'ny diabeta
Ahena olana amin'ny voa
Manatsara ny fahasalaman'ny taolantsika.
misakana tsy fahampian-dra noho ny atin'ny fibra avoakany.
Edamame, satria avy amin'ny soja, mampitombo ny indice-ntsika amin'ireto zavatra manaraka ireto ihany koa:
Ahoana ny fihinanana azy?
El edamame Mora tokoa ny mihinana, voaomana haingana ary mahafinaritra ny vokany. Amin'ny fotoana fisakafoanana dia vohana ny polony miaraka amin'ny fanampian'ny nify na tanana, miaraka amin'ny lela manangona ny voam-bary ao anatiny ary ariana ny polony. Izy io dia toy ny fihinanana fantsona.
Ny mahazatra sy tsotra indrindra dia andrahoina izy ireo anaty rano misy sira kely. Mandritra ny 3 na 5 minitra eo ho eo. Raha vao nandrahoina dia afaka miaraka aminy isika miaraka amin'ny menaka sy sakamalao sira na zava-manitra. Etsy ankilany, azontsika atao ny manala ireo voamaina ary manampy azy ireo amin'ny salady, na arotsaka ao anaty vilany misy saosy soja kely sy tongolo lay voatoto.
Ny zavatra mahazatra dia ny mandray azy ho aperitifIzy io dia aseho miaraka amn'ny pod rehetra nandrahoina ary mihinana azy ireo toa ny fantsona. Afaka entina mafana na mangatsiaka izy ireo. Malemy ny tsirony ary atambatra amin'ny sakafo maro be.
Amin'izao fotoana izao, aorian'ny lazan'ny sakafo ity dia afaka mahita edamame isika amin'ny sehatra sy tsena samihafa izay fantatry ny rehetra tsara. Afaka mahita azy amin'ny endrika isan-karazany isika, voa vaovao, voa, vonona hihinana na hangatsiakaDia lazainay aminao hoe aiza no ahazoanao an'io sakafo matsiro io.
En Amazon Spain masomboly edamame dia azo vidiana amin'ny fambolena.
Ao amin'ny fivarotana lehibe Lidl Hitanay ilay mangatsiaka, miaraka amina endrika 400 grama.
En mercadona, iray amin'ireo supermarket lehibe Espaniôla ary toerana tsy ahitan'izy ireo tahiry ankehitriny, hitantsika amin'ny habetsahan'ny 500 grama ao amin'ilay faritra mangatsiaka.
En Carrefour Hitanay tamin'ny endrika kely kokoa, edamame vonona hihinana 100 grama, fomba iray tsara hanandramana azy raha mbola tsy fantatrao izany.
En An-tsaha, ato amin'ity supermarket lehibe ity dia ahitantsika azy anaty endrika 300 grama.
El Fitsarana anglisy, mivarotra edamame amina 500 grama izahay, ary ho hitanao izany any amin'ny sampana mivaingana.
La sirenIty supermarket lehibe ity, izay mivarotra vokatra mangatsiaka, dia nividy edamame, amin'ny endrika 400 grama.
Edamame Izy io dia misy vidiny manomboka amin'ny 1,80 € ka hatramin'ny 4 euro eo ho eo, arakaraka ny marika sy ny habetsany.
Raha mipetraka amin'ny tanàna antonony ianao dia azo antoka fa hahita ny safidy hahazoana edamame, amin'ny endrika rehetra. Na izany aza, raha tsy azonao dia azonao atao ny manafatra an-tserasera azy, amin'izao fotoana izao dia misy pejin-tranonkala marobe miaraka amin'ireo magazay an-tserasera manome antsika ny vokatra vaovaony ary mandefa azy ireo aty aminay ao anatin'ny fotoana fohy.
Mandrosoa ary andramo ity sakafo mahasalama ity sy ny fomba nanjary lamaody. Safidy mety tsara ho an'ny sakafo maivana haingana, tsy misy kaloria ary matsiro. Milalaova amin'ny fomba fahandro anao ary ampio amin'ny fomba mahaliana anao indrindra. Azonao antoka fa hanome ny loviao ny paty tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Lazainay aminao ny atao hoe edamame, ny fananany ary ny fomba fandraisana azy